१० तत्वहरु अत्यधिक प्रभावी को लागी, आकर्षक ईमेल सन्देश प्रतिलिपि | Martech Zone
१० तत्वहरु अत्यधिक प्रभावी को लागी, आकर्षक ईमेल सन्देश प्रतिलिपि
जबकि ईमेल HTML, उत्तरदायी डिजाइन, र केहि अन्य तत्वहरु संग पछिल्लो केहि दशकहरुमा थोरै उन्नत भएको छ, एक प्रभावकारी ईमेल को पछाडि ड्राइविंग बल अझै पनी छ सन्देश प्रतिलिपि कि तपाइँ लेख्नुहुन्छ। म प्राय जसो म ईमेलहरु बाट प्राप्त गर्दछु म कम्पनीहरु बाट प्राप्त गर्दछु जहाँ मलाई थाहा छैन कि उनीहरु को हुन्, उनीहरुले मलाई ईमेल किन गरेनन्, न त उनीहरु मलाई के गर्न को लागी आशा गर्छन् ... र यसको परिणामस्वरूप मेरो सदस्यता समाप्त हुने बित्तिकै उनीहरुको सदस्यता समाप्त हुन्छ। उनीहरुको लागि।
मँ एक ग्राहक संग काम गरीरहेको छु उनीहरुको धेरै स्वचालित ईमेल को लागी प्रतिलिपि लेख्न को लागी ... सदस्यता अधिसूचना, स्वागत ईमेल, ईमेल मा (ईमेल), पासवर्ड रिसेट ईमेल, आदि यो वेब मा अनुसन्धान को एक राम्रो महिना भएको छ र मलाई विश्वास छ कि मँ अन्य प्रतिस्पर्धी लेखहरु को लागी मेरो विचारहरु र निष्कर्षहरु यहाँ साझा गर्न को लागी पर्याप्त बारीकियों लाई खुलाएको छु।
मेरो ग्राहक धैर्यतापूर्वक मलाई यो कार्य पूरा गर्न को लागी प्रतीक्षा गरीरहेको छ ... सोच्दै मँ एक शब्द कागजात खोल्न जाँदै थिएँ, उनीहरुको प्रतिलिपि लेख्न, र यो उनीहरुको प्लेटफर्म मा सम्मिलित गर्न को लागी आफ्नो विकास टीम लाई प्रदान गर्न। त्यो हुन सकेन किनकि प्रत्येक तत्व राम्रो संग सोच्नु पर्छ र यो अनुसन्धान को एक टन आवश्यक छ। सब्सक्राइबरहरु संग धैर्य छैन कि कम्पनीहरु को लागी आफ्नो समय बर्बाद संचार को लागी जो मूल्य को होईन। म यो सुनिश्चित गर्न चाहान्छु कि यी ईमेलहरुको लागी हाम्रो संरचना सुसंगत थियो, राम्रो संग सोचेको थियो, र ठीक संग प्राथमिकता दिईएको थियो।
साइड नोट: म लेआउट, डिजाइन, र न त कुरा गर्न जाँदैछु अनुकूलन यहाँ ... यो प्रतिलिपि को लागी धेरै विशिष्ट छ कि तपाइँ तपाइँको प्रत्येक ईमेल मा लेख्दै हुनुहुन्छ।
प्रभावी ईमेल प्रतिलिपि तत्वहरु
त्यहाँ १० प्रमुख तत्वहरु मैले प्रभावी ईमेल प्रतिलिपि लेख्न को लागी पहिचान गरेको छु। ध्यान दिनुहोस् कि ती मध्ये केहि वैकल्पिक छन्, तर आदेश ईमेल को माध्यम बाट एक ईमेल ग्राहक स्क्रोल को रूप मा अझै पनी महत्वपूर्ण छ। म पनि ईमेल को लम्बाइ downplay गर्न चाहन्छु। एक ईमेल संचार को लक्ष्य सम्म पुग्न को लागी लामो समय को रूप मा आवश्यक छ ... कम, कुनै अधिक। यसको मतलब यो हो कि यदि यो एक पासवर्ड रिसेट हो, प्रयोगकर्ता मात्र जान्न चाहन्छन् के गर्ने र यो कसरी गर्ने। जे होस्, यदि यो एक मनोरन्जन कहानी हो, हजार शब्दहरु को एक जोडी बिल्कुल तपाइँको ग्राहक को मनोरन्जन को लागी उपयुक्त हुन सक्छ। ग्राहकहरु लाई स्क्रोल गर्न मन छैन जब सम्म जानकारी राम्ररी लेखिएको छ र स्क्यानि and र पढ्न को लागी विभाजित छ।
विषय रेखा - तपाइँको विषय लाइन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो जब एक ग्राहक तपाइँको ईमेल खोल्न को लागी जाँदै छ वा छैन निर्धारण गरीरहेको छ। प्रभावकारी विषय लाइनहरु लेख्न मा केहि सुझावहरु:
यदि तपाइँको ईमेल एक स्वचालित प्रतिक्रिया (ढुवानी, पासवर्ड, आदि) हो, बस कि राज्य। उदाहरण: [प्लेटफर्म] को लागी तपाइँको पासवर्ड रिसेट अनुरोध।
यदि तपाइँको ईमेल जानकारीमूलक छ, एक प्रश्न सोध्नुहोस्, एक factoid समावेश गर्नुहोस्, हास्य लागू गर्नुहोस्, वा एक इमोजी जो ईमेल मा ध्यान आकर्षित गर्दछ जोड्नुहोस्। उदाहरण: डिजिटल रूपान्तरण परियोजना को %५% असफल किन हुन्छ?
प्रिहेडर - धेरै प्रणाली र कम्पनीहरु preheader पाठ को लागी धेरै सोच्दैनन्। यो पूर्वावलोकन पाठ हो कि ईमेल ग्राहकहरु तपाइँको विषय लाइन को तहत प्रदर्शन। तिनीहरू प्राय ईमेल को भित्र सामग्री को पहिलो केहि लाइनहरु छन्, तर HTML र CSS को साथ तपाइँ वास्तव मा preheader पाठ अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ र यो ईमेल को शरीर भित्र लुकाउनुहोस्। Preheader तपाइँलाई तपाइँको विषय लाइन मा विस्तार गर्न र पाठकहरुको ध्यान बुझ्न को लागी सक्षम बनाउँछ, उनीहरुलाई पूरै ईमेल पढ्न को लागी मोहक। जस्तै। माथिको डिजिटल रूपान्तरण विषय लाइन संग जारी, मेरो preheader हुन सक्छ, अनुसन्धानले निम्न ३ कारणहरु प्रदान गरेको छ किन डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाहरु ब्यापार भित्र असफल.
खुल्दै - तपाइँको खुल्ला अनुच्छेद तपाइँको preheader हुन सक्छ वा तपाइँ एक सलाम, पूरै स्वर सेट, र संचार को लक्ष्य स्थापित गर्न को लागी अतिरिक्त ठाउँ को लाभ लिन सक्नुहुन्छ। उदाहरण: यस लेखमा, हामी एक व्यापक अनुसन्धान फॉर्च्यून ५०० कम्पनीहरु को भित्र गरीएको छ कि ३ सबैभन्दा सामान्य कारणहरु लाई संकेत गर्दछ कि डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाहरु उद्यम भित्र असफल हुन जाँदैछन्।
कृतज्ञता (वैकल्पिक) - एक पटक तपाइँ टोन सेट, तपाइँ वैकल्पिक रूपमा पाठकलाई धन्यवाद दिन चाहानुहुन्छ। उदाहरण: एक ग्राहक को रूप मा, हामी विश्वास गर्छौं कि यो जानकारी साझा गर्न को लागी यो महत्वपूर्ण छ कि हामी हाम्रो सम्बन्ध लाई ल्याउने मूल्य बृद्धि गर्न को लागी। [कम्पनी] लाई तपाइँको संरक्षण को लागी धन्यवाद।
शारीरिक - छोटो र रचनात्मक रूपमा तपाइँ माथि भनिएको लक्ष्य सम्म पुग्न को लागी जानकारी प्रदान गरेर मानिसहरुको समय को सम्मान गर्नुहोस्। यहाँ केहि युक्तिहरु छन् ...
प्रयोग गर्नुहोस् ढाँचा संयमित र प्रभावकारी। मानिसहरु मोबाइल उपकरणहरु मा ईमेल को एक धेरै पढ्छन्। उनीहरु पहिले ईमेल को माध्यम बाट स्क्रोल गर्न र हेडलाइन्स पढ्न चाहानुहुन्छ, तब गहिरो सामग्री को लागी खुदाई गर्न सक्नुहुन्छ। साधारण हेडलाइन्स, बोल्ड सर्तहरु, र बुलेट बिन्दुहरु उनीहरुलाई स्क्यान गर्न र प्रतिलिपिमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्न को लागी पर्याप्त हुनु पर्छ।
प्रयोग गर्नुहोस् ग्राफिक्स संयमित र प्रभावकारी। इमेजरीले ग्राहकहरुलाई बुझ्न र तपाइँले प्रदान गरिरहनुभएको जानकारीलाई कायम राख्न मद्दत गर्दछ छिटो पाठ पढ्नु भन्दा। एक पाई चार्ट हेर्नुको सट्टा बुलेट अंक र मूल्यहरु पढ्न को बारे मा सोच्नुहोस् ... चार्ट कहीं धेरै प्रभावकारी छ। ग्राफिक्स कहिल्यै एक व्याकुलता हो, र न त अनावश्यक, यद्यपि। हामी पाठकहरुको समय बर्बाद गर्न चाहदैनौं।
कार्य वा प्रस्ताव (वैकल्पिक) - प्रयोगकर्तालाई के गर्न को लागी भन्नुहोस्, किन यो गर्न को लागी, र जब यो गर्न को लागी। म अत्यधिक सिफारिश गर्दछु कि तपाइँ यो मा एक आदेश संग केहि प्रकार को एक बटन को उपयोग। उदाहरण: यदि तपाइँ तपाइँको अर्को डिजिटल रूपान्तरण परियोजना को योजना बनाइरहनुभएको छ, एक नि: शुल्क परिचयात्मक परामर्श बैठक अब अनुसूची। [अनुसूची बटन]
प्रतिक्रिया (वैकल्पिक) - को लागी सोध्नुहोस् र प्रतिक्रिया प्रदान गर्न को लागी एक साधन प्रदान गर्नुहोस्। तपाइँका ग्राहकहरु लाई सुनेको कदर गर्दछन् र त्यहाँ एक ब्यापारिक अवसर हुन सक्छ जब तपाइँ उनीहरुको प्रतिक्रिया माग्नुहुन्छ। उदाहरण: के तपाइँ यो जानकारी मूल्यवान पाउनुभयो? त्यहाँ अर्को विषय तपाइँ हामीलाई अनुसन्धान र जानकारी प्रदान गर्न चाहानुहुन्छ? यो ईमेल को जवाफ दिनुहोस् र हामीलाई थाहा दिनुहोस्!
संसाधन (वैकल्पिक) - अतिरिक्त वा वैकल्पिक जानकारी प्रदान गर्दछ कि संचार को समर्थन गर्दछ। यो जानकारी संचार को लक्ष्य को लागी प्रासंगिक हुनु पर्छ। माथिको यस मामिलामा, यो अतिरिक्त, सान्दर्भिक ब्लग पोष्टहरु जुन तपाइँले गर्नुभयो, विषय मा मुट्ठी भर लेख, वा लेख मा सन्दर्भित वास्तविक संसाधनहरु हुन सक्छ।
जडान गर्नुहोस् - संचार विधिहरु (वेब, सामाजिक, ठेगाना, फोन, आदि) प्रदान गर्नुहोस्। मानिसहरुलाई थाहा छ जहाँ र कसरी उनीहरु तपाइँ वा तपाइँको मिडिया सोशल मिडिया, तपाइँको ब्लग, तपाइँको फोन नम्बर, वा यहाँ सम्म कि तपाइँको भौतिक स्थान संग जोड्न सक्नुहुन्छ।
अनुस्मारक -मानिसहरु लाई उनीहरु कसरी सदस्यता लिनुहोस् र अप्ट आउट वा तपाइँको संचार प्राथमिकताहरु लाई परिवर्तन गर्न को लागी एक साधन प्रदान गर्नुहोस्। तपाइँ आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि कती ईमेलहरु मानिसहरु मा छनौट गरीएको छ, त्यसैले उनीहरुलाई सम्झाउनुहोस् कि उनीहरु कसरी तपाइँको ईमेल सूची मा थपिएका थिए! उदाहरण: हाम्रो ग्राहक को रूप मा, तपाइँ यी न्यूजलेटरहरुमा रोज्नुभएको थियो। यदि तपाइँ अप्ट आउट वा तपाइँको संचार प्राथमिकताहरु लाई अपडेट गर्न चाहानुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
संगठनाई तपाइँको ईमेल संरचना र प्रतिलिपि मा कुञ्जी हो, त्यसैले तपाइँको ईमेलहरु मध्ये प्रत्येक को लागी एक रूपरेखा सेट गर्नुहोस् ताकि ग्राहकहरु लाई चिन्नुहोस् र प्रत्येक एक को सराहना गर्नुहोस्। जब तपाइँ अपेक्षाहरु लाई सेट गर्नुहुन्छ र उनीहरु लाई पनी पार गर्नुहुन्छ, तपाइँको ग्राहकहरु खुल्नेछन्, क्लिक गर्नुहोस्, र धेरै टाढाको कार्य लिनुहोस्। यो राम्रो सगाई, अधिग्रहण, र तपाइँको ग्राहकहरु को अवधारण को लागी नेतृत्व गर्दछ।
टैग: ईमेलईमेल निकायकार्यको लागि ईमेल कलईमेल प्रतिलिपिईमेल copywritingईमेल ctaईमेल संलग्नताईमेल फुटरईमेल ढाँचाईमेल ग्राफिक्सईमेल हेडरइमेल मार्केटिङईमेल खोल्दैईमेल जवाफईमेल प्रतिधारणईमेल नमस्कारईमेल खण्डहरुईमेल विषय लाइनप्रिहेडर
साँच्चै ग्राहक केन्द्रित कम्पनीहरु बाट3पाठ